Ihe omuma: Ụlọ ọrụ kacha mma maka ihuenyo maka azụmahịa
Nchịkọta ihu bụ ọrụ dị elu nke na-enyere aka wepụ data site na weebụsaịtị dị iche iche. Ọ na-abata na mbipụta abụọ: Akara scrapers ma ọ bụ ihe ntanetị. Ntucha ihuenyo bụ isi dị mma maka mmalite na freelancers, na mbipụta ọkachamara dị mma maka ụlọ ọrụ na ụdị elu. Ntucha ihuenyo mejupụtara ihe nnọchiteanya nke proxy ma na-ejide ma rịọ HTTP na HTTPS. Ọ na-agụnye engineseded scripting engines na nwere ike iji ColdFusion, PHP, na Java. A na-edepụta ọrụ ntanetị ndị a ma ama maka nchịkọta data .
Nyocha data (nhazi Chrome):
Nchịkọta data bụ usoro ihe nchịkọta zuru oke na nke bara uru. Ọ na-agụnye ihe omuma ozi sitere na ndetu na tebụl wee bubata data na usoro XLS, JSON na CSV. Ụdị ụgwọ ya dị mma maka ụlọ ọrụ, ọ dịghịkwa mkpa ịmemme ọ bụla iji nweta uru site na ngwa mgbakwunye a. Naanị ị ga-agbakwunye ihe mgbakwunye a na ihe nchọgharị Chrome gị ma malite ịpị data sitere na ibe weebụ ndị chọrọ.
nchịkọta weebụ (nhazi Firefox):
nchịkọta weebụ dị mma nye ndị ọrụ Firefox wee nye gị ohere ịmepụta saịtị saịtị. Site na ọrụ a, ịnwere ike ịdọrọ saịtị gị ma meziwanye ọnọdụ ya na search engine n'oge ọ bụla. Naanị gbakwunye ndọtị a na Firefox gị ma wepụ data site na ebe nrụọrụ weebụ dị ike. Ọ bụ freeware na adaba maka mmalite.
Ngwá ọrụ bụ ọrụ nlekọta ihuenyo ọzọ nke na-ewepụta data site na PDF faịlụ, weebụsaịtị, blọọgụ onwe, na ihe oyiyi. Ọ na-agbanwe ya ka ọ bụrụ usoro a na-achọsi ike ma mee ka ị dị ọcha na nsonaazụ dị ọcha. Naanị ị ghaghị ịkọwapụta data ịchọrọ wepụ ma pịa "nhọrọ" ịhọrọ iji malite. A maara ọgwụ maka ejiji enyi ya, ma ị nwere ike itinye ogidi ọhụrụ iji JQuery na XPath. I nwekwara ike idetuo ma ọ bụ bufee data gị na Google Docs na faịlụ XSL ngwa ngwa.
Onye na-ekiri ihe nkiri:
Onye na-ekpuchi anya bụ ihe ọzọ na-ekpuchi ihuenyo ihuenyo ya na igodo ntinye na ịpị iji jiri data dị iche iche wepụta data. Ị nwere ike ịnweta data sitere na weebụsaịtị ndị chọrọ na mbupụ ozi akpọrọ dịka CSV, JSON, SQL na XML faịlụ. Ọ dabara maka ndị ọrụ Windows na-ahapụ gị nyocha data site na ruo 40,000 ibe weebụ kwa ụbọchị. Onye na-ekiri ihe na-ahụ anya nwere ike ịnakọta ozi site na vidiyo na ihe oyiyi ma nyochaa ya dị ka ihe niile ị chọrọ. Usoro a dị na ma n'efu ma kwụọ ụgwọ ụgwọ ma kwadoro maka ụlọ ọrụ na nnukwu ụlọ ahịa.
Ọrụ niile a na-ekpuchi ihuenyo nwere ike ịchọta data na-agbanwe agbanwe ma nwee ike ịchọta ọtụtụ ọrụ, n'otu oge, ịchekwa oge gị na ume gị Source .